သေဆုံးပြီးသော အဖေ ရဲ့ အသုဘ ရုပ်အလောင်း ကို ဆေးရုံကြီးအအေး တိုက် မှ ထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူ ရဲ့ အိမ်သို့ ပို့ လိုက်သော အ ခါ… – Na Pann San
Na Pann San W | July 18, 2020 | Knowledge | No Comments
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက် မှ ထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ် တင်၍ သေဆုံးသူ ရဲ့ အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာ ခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ကို နာရေးကားရောက် လာတော့ မိဘကျေးဇူးတွေ နဲ့ အယူသီးမှုတွေ ကို ခွဲခြားသိမြင်နိင်ပြီး သိပ်ချစ် ပါတယ် ဆိုတဲ့ အမှန်တရား ။
အသုဘရုပ် အလောင်း ကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက် မှ ထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင် ၍ သေဆုံးသူ ရဲ့အိမ်သို့ ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာ ခဲ့တယ်…
အိမ်ရှေ့ကို နာရေး ကားရောက် လာတော့ အလောင်းကို အိမ်ထဲသွင်းမယ် လုပ်စရာရှိ တာလုပ်မယ်ပေါ့ ကားပေါ်ကနေ အလောင်းချမယ် လုပ်တော့ အိမ်ရှင်တွေက အပြေးရောက်လာပြီး မျက်ရည်လေးစမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဆရာတို့ အိမ်ထဲအလောင်း မပြင်ဘူးနော် အိမ်ရှေ့မှာပဲအလောင်းပြင်ပေးပါနော်တဲ့
” အမ ဘာဖြစ်လို့လဲ ” လို့ကျွန်တော်ကမေး လိုက်တော့… ဟိုလေ ” ဆရာ အပြင်မှာသေတဲ့အလောင်းကို အိမ်ထဲမသွင်းကောင်းဘူးတဲ့ အိမ်သားတွေခိုက်တက်တယ် တဲ့ ” ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ကလဲမကြိုက်ဘူး ရပ်ကွက်နာတယ်တဲ့… ဟောဗျာ…”ဒါနဲ့အမ အခုသေတဲ့သူက အမနဲ့ ဘာတော်လဲ လို့မေးလိုက်တော့ “… ဆရာ အခုဆုံးသွားတဲ့သူက ကျွန်မအဖေ ပါတဲ့.
အော်…ဟုတ်ကဲ့ အမအေ ဖလား ဒါဆိုအိမ်ထဲ အလောင်း မပြင်ဘူး အပြင်မှာပဲ အလောင်းပြင်မယ်ပေါ့ ဟုတ်လားအမ… ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ အပြင်မှာပဲပြင်ပေးပါတဲ့…ကောင်းပါပြီအမ ကျွန်တော် တို့ အမတို့စိတ်တိုင်းကျ အပြင်မှာပဲအလောင်းပြင်ပေးပါမယ် ငိုတဲ့သူက ငိုကြတယ် ကျွန်တော်တို့လဲ လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကူညီပေးခဲ့ပါပြီ…
အသုဘ အလောင်းပြင်ပြီး အပြန်ကား ပေါ်မှာ ကျွန်တော် အသိအမှန်တရားတစ်ခု ချက်ချင်း ရလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့….. အော်…. ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝကနေ လူလားမြှောက်အောင် ပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဖေဖေ …
နေပူထဲမှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်ပြီး သားသမီးတွေ မျက်နာမငယ်ရအောင် ကျွေးမွေးပြုစု ရှာဖွေ စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ ဖေဖေ… သားသမီးတွေအတွက်ဆို မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ… အိမ်ထောင်ဦးစီး သူတော်ကောင်းကြီး ဖေဖေ… ဖေဖေ ရယ် … အခု ဖေဖေ သေဆုံးသွားတော့ အိမ်ထဲတောင် အဝင်မခံတော့ဘူး ဖေဖေရယ်…
အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖေဖေ ရုန်းကန်ရှာဖွေပြီး စုဆောင်းကာ ဖေဖေဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်လေး အခု ဖေဖေ ဂေါင်းချဖို့တောင် နေရာမရှိတော့ဘူး ဖေဖေရယ်… ဖေဖေ ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက် ခဲ့တာ နစ်ပေါင်းများစွာပါ ဖေဖေ အခုတော့… နောက်ထပ် ၅ရက်နေရင် ဖေဖေကို အိမ်ကနေ သားသမီးတွေက ရာသက်ပန် နင်ထုတ်တော့မှာ ဖေဖေရယ်…
ကိုယ်သိပ်ချစ်ပါတယ် ချစ်ပါတယ် ဆိုပြီး ပါးစပ်ကလေးနဲ့မိဘကျေးဇူး တရားတွေကို တန်ဖိုးမဖြတ်လိုက်ကြပါနဲ့မိဘကျေးဇူးကို မဆပ်မိကြလို့ သေခါမှနောင်တမရမိကြလိုက်ပါနဲ့နော်။
စာရေးသူကို လေးစားစွာခရစ်ဒက် ပေးပါသည်
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဓလေ့ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေအ တိုင်းလက်ထပ် ခဲ့ တဲ့ သီပေါသားနဲ့ပြင်သစ်သူတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
ခြင်္သေ့ရုပ်ထု ပါးစပ်ထဲ မှာ မြတ်ပင်ပေါက်နေတာများ တွေ့ခဲ့ရင် အမြန်နှုတ်ယူလိုက်ပါ
မြန်မာပြည်က ငါးခြောက်လုပ်ငန်းတွေမှာ ယင်မနားဆေး ဆိုတဲ့ အဆိပ်တွေ တရားဝင်သုံးခွင့် ရနေပြီလား..?